भुतपूर्व गोर्खा सैनिक अर्थात् शिक्षाको पहिलो दियो « Naya Page
भुतपूर्व गोर्खा सैनिक अर्थात् शिक्षाको पहिलो दियो
प्रकाशित मिति : 26 September, 2019 9:54 pm
– प्रा.डा. नोवलकिशोर राई
नाम काटेर आउँदा हातमा कति पो दाम हुन्थ्यो होला र ! अनि रजा(छुट्टी)मा आउँदा आमा—बुबा, भाइबहिनी, मामा—माइजु, काका—काकी, सासु—ससुरा र सालासाली लगायतका नातागोतालाई लुगाफाटा, गरगहना र कोसेली ल्याइदिनुपर्ने, हाट बजारमा सोल्टिनी, साली र भदैनीहरूलाई ख्वाउनुपर्ने जस्ता बाध्यता, रहर र करले सताइएका हाम्रा दाजुहरूले स्कुल सञ्चालन कर, चन्दा र पाटी खरी, कलम—मसी, किताबहरूको पनि जोहो गर्नैपथ्र्यो । मलाई र सानी दिदीलाई छुट्टीमा फर्कंदा हाम्रा जेठा दाइ (नं. २११३५७४३, २/७ जिआर) ले दार्जीलिङबाट काठको फ्रेम भएको स्लेट ल्याइदिनुभएको कुरा अझै गरिरहनुहुन्छ अनि त्यो स्लेट फुटेको दिन दाजुले दिनुभएको गोदाइ पनि सम्झन्छु (उहाँको मन दुख्ला भनेर सो कुरा भन्न मन लाग्दैन) ।
दुई तीन वर्षको अथक प्रयासले विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पनि बढे । कक्षाको स्तर पनि बढ्यो, अनि शिक्षाप्रतिको जनचासो पनि खुब बढ्यो, तर त्यस भेकमा अर्को एउटा अप्ठ्यारो कुरो के थियो भने उमेर पुगेका माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूमा ‘लाहुर’ जाने परम्परा थियो । गाउँमा ब्रिटिस सेना र भारतीय सेनामा लैजानका लागि भूपू गोरखा सैनिकहरू गल्लावाल भएर काम गर्दथे । सत्र—अठार वर्षका लक्का जवानहरूलाई भर्ती जाने अनेक आकर्षणहरू थिए ।
विदेश घुम्न पाइने, पैसा कमाइने र समाजमा रवाफ बढ्ने भएकोले उनीहरूका लागि ठूलो आकर्षण थियो भने अभिभावकका लागि अर्थोपार्जन मुख्य थियो । स्वभाविक रूपमा नै छोरो लाहुरे भए ऋणमुक्त हुनसक्ने, साहुले पत्याउने र अभाव मेटिने कुराले आमा—बुबाहरू आफ्ना सन्तानलाई सकभर मलाया नभए भारत नै भए पनि पठाउन चाहन्थे । यो अवस्थाले गर्दा हाम्रा हेडसर पनि निक्कै हतोत्साही भइसक्नुभएको थियो ।
हाम्रा गुरूहरूले आफ्ना चेलाहरू लाहुर नजान, नपठाउन भनेर सानै रूपमा भए पनि अभियान सुरू गर्नुभएको थियो— आजभोलिका नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू जस्तै ! आखिर सिद्धान्त र व्यवहार जुन प्रबल हुन्छ, त्यसैले नाघेर जाने कुरो त रहेछ । लाहुरे नपठाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि व्यवहारिक रूपमा लागु हुन सकेन । देशमा असल नेता पनि नजन्मने अनि मालसामान जस्तो नेताहरूलाई विदेशबाट पैठारी पनि गर्न नमिल्ने भएर देश उँभो लाग्ने सकेको छैन । अझ आजभोलि त दिनहुँ सयौँ युवाहरू विदेशिदैछन् ।
हाम्रो हेडसर सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ‘यो अन्धो (मलाई), त्यो बामपुड्को (मनोज) र अर्को घाउरे (प्रदीप) यिनीहरू मात्र लाहुर नगएर देशमा नै अडिएलान् कि ! हुन पनि लगभग त्यस्तै भयो पनि । मनोज दाइ र म लाहुर जान सकेनौँ अनि प्रदीपजीले कोशिसै गरेनन् होला । वि.सं. २०२३—२४ सालतिरै उनी ओभरसियर भइसकेका थिए अनि बाँचेका भए अहिलेसम्म इञ्जिनियरका हाकिम भइसकेका हुन्थे । मनोज दाइ आफूले त्यति उपल्लो तहको शिक्षा हासिल नगरे पनि दमक, झापामा पहिलो बोर्डिङ स्कुल खोलेर सालैपिच्छे उम्दा विद्यार्थी उत्पादन गरेर नाम र दाम कमाएर समाजमा आफ्नो ठाउँ बनाउनुभएकै छ । म आफू भने के भनुँ, तर म आफ्नो वर्तमानसँग खुशी छु ।
गाउँमा कुनै युवक लाहुर (भारत वा मलाया सिंगापुर)बाट छुट्टीमा आउँदा पनि उसले स्कुललाई चन्दा(कर) दिनुपर्दथ्यो । यो रकम निक्कै राम्रो हुने गर्दथ्यो, र प्रायः सबैले खुशीले नै दिन्थे पनि । त्यति मात्र नभएर कतिपय दाजुहरूले पल्टनबाट छुट्टीमा घर आउँदा हामीलाई फुटबल, भलिबल वा अन्य खेलकुदका सामानहरू पनि ल्याइदिन्थे ।
यसैको परिणामले होला हाम्रो स्कुल खेलकुदमा अरु वरिपरिका स्कुलहरूभन्दा ‘भाले’ थियो । कुरूम्बा स्कुल, नाङरूङ स्कुल, इभाङ स्कुल, पञ्चमी स्कुलहरूलाई हामी सधैँ जित्थ्यौँ । हाम्रो पालामा फुटबल नै लोकप्रिय थियो अनि हाम्रो स्कुल टिम सर्वोत्तम थियो भन्दा गफ हुँदैन । यसै टिमको दौँतरीहरू मलायामा नेपालका कप र भारतमा ब्रिगेड, कमान्डर र सर्भिसेस टिममा पनि एकाध पुगेर नाम कमाएका छन् ।